'बच्चाहरू रोइरहेका थिए, बसबाट निस्किँदा घटनास्थल हेर्नसक्ने अवस्थामै थिएन' :: नारायण खड्का :: Setopati
'बच्चाहरू रोइरहेका थिए, बसबाट निस्किँदा घटनास्थल हेर्नसक्ने अवस्थामै थिएन'
सल्यान बस दुर्घटनाकी घाइते दाङ, तुलसीपुर- ६ रजौराकी ५० वर्षीया सरस्वती केसी। तस्बिरः नारायण खड्का/सेतोपाटी
दाङ, तुलसीपुर-९ बेलुवाकी १५ वर्षीया देवी खत्री तिहारमा सल्यान गइन्। अंकलका छोराहरूलाई टीका लगाउन उनी सल्यान, चोरपानीस्थित पुर्ख्यौली घर गएकी थिइन्।
फर्किँदा चोरपानीदेखि लान्टीसम्म रिजर्भ गाडीमा आइन्। अनि लान्टीदेखि तुलसीपुर आउने बस चढिन्। अन्तिमतिरको सिटमा बसेर यात्रा गरिरहेकी उनका साथमा दुई दाजु पनि थिए।
सल्यानको दुलधारा पोखरा खलंगा हुँदै तुलसीपुरतर्फ आउन लागेको ना २ ख २५५२ नम्बरको बस आफ्नै गतिमा कुदिरहेको थियो। सबै सिट यात्रुले भरिएको थियो। केही उभिएका पनि थिए।
देवीका अनुसार बस चढेको एक घन्टा जतिपछि लुमाम बजारमा राकियो। चालक र सहचालक झरेर बजार छिरे। निकैबेर बेपत्तै भए।
यात्रु कराउन थालेपछि बल्ल पौने घन्टा जस्तोमा चालक आए। सहचालक भने फर्केनन्। बस फेरि गुड्यो।
यसपछि देवी बसमा ढुक्कले निदाएकी थिइन्।
बिहान करिब सवा ११ बजेको थियो। कपुरकोट गाउँपालिका वडा नं. ५ खारखोला नजिकै पुग्दा ठूलो आवाज आयो। बसका मानिसहरू चिच्याउन, कराउन थाले।
देवी जब बिउँझिन् उनी चढेको गाडी खसेर गल्ट्याङगुल्टुङ गर्दै थियो। गाडी खसेको आवाजले झस्किएकी उनले सुरूमा त के भयो, पत्तो पाइनन्।
देवीले सेतोपाटीसँग फोन कुराकानीमा भनिन्, 'बच्चाहरू मम्मी मम्मी भन्दै रोइरहेका थिए। जम्मै यात्रु कराउँदै, चिच्याउँदै थिए। बस पल्टिँदै जाँदा को कता को कता पर्‍यो थाहै भएन। म सिटमुनि फसेकोजस्तो लाग्छ।'
'दुर्घटनापछि केही बेरमा एक जना दादा आउनुभयो। पछि अर्को दादा पनि आएर मलाई त्यहाँबाट निकाल्नुभएको हो,' देवीले थपिन्, 'म निस्किएर हेर्दा घटनास्थल हेर्नसक्ने अवस्थामै थिएन। जताततै रगत थियो। एउटाको रगत अर्कोमाथि बगिरहेको थियो। म त्यो शब्दमा वर्णन गर्न पनि सक्दिनँ।'
त्यो भयावहपूर्ण दृश्य नियाल्न नसकेर आफू सडकमै थुचुक्क बसेको उनले बताइन्। त्यसपछि बसेरै घरमा आमाबुवालाई फोन गरेर घटनाबारे जानकारी दिइन्।
उनका दुवै खुट्टा सिटले च्यापेको थियो। उपचारका लागि सुरूमा सल्यानको श्रीनगर पुर्‍याइयो। पछि थप उपचारका लागि दाङ, तुलसीपुरको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल ल्याइयो।
'म ठूलो भाग्यले बाँचेजस्तो लाग्छ, भाग्यमानी रहेछु,' देवीले भनिन्, 'दुवै खुट्टामा सामान्य चोट छ। अहिले त म घर आइसकेँ।'
आइतबार दुर्घटना भएको उक्त बसमा सवार तीस जनामध्ये १२ जनाको मृत्यु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका प्रहरी नायब उपरीक्षक गोविन्द थापाका अनुसार दस महिला र दुई पुरुषको बस दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएको हो।
दुर्घटनामा घाइतेमध्ये केहीको सल्यानकै श्रीनगरमा उपचार भइरहेको छ भने केहीलाई थप उपचारका लागि दाङ र बाँकेका अस्पतालमा रिफर गरिएको छ। केहीलाई हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं पनि पठाइएको छ।
दुर्घटनामा परेको बस। तस्बिर स्रोत: गोविन्द थापा।
त्यही बसमा देवीजस्तै सिटमुनि च्यापिएर घाइते भएकी अर्की यात्रु हुन् दाङ, तुलसीपुर- ६ रजौराकी ५० वर्षीया सरस्वती केसी।
उनी पनि भाइटीकाको दुई दिनअगाडि सल्यानको लेखपोखरा पुगेकी थिइन्। माइतीमा दुई भाइसँग टीका सकेर दाङ आउँदै गरेकी उनका पनि बसमा आँखा झ्याप्प लागे।
बस पल्टिन थालेपछि उनी झस्किन्। बस गुल्टिन थाल्यो। सिटले सरस्वतीलाई च्याप्यो।
छटपटाउँदै सकिनसकी सरस्वतीले भनिरहिन्, 'मेरो हात भाँचियो। मलाई तानिदिनू। छिटो निकाल्नुस्, मलाई बचाउनुस्।'
सरस्वतीका अनुसार जति हारगुहार गरे पनि निकैबेरसम्म कोही आएनन्।
बल्ल आधा घन्टाजतिपछि एक जना प्रहरी त्यहाँ पुगे। प्रहरीले उनलाई सिटमुनिबाट निकाले। पिठ्यूँमा बोकेर बाटोसम्म ल्याए। सुरूमा उपचारका लागि श्रीनगर पुर्‍याइयो। अहिले तुलसीपुर राप्ती प्रादेशिक अस्पताल ल्याइएको छ।
यहीँ उपचार भइरहेको छ सल्यान, शारदा नगरपालिका- ५ रानीकोटका २० वर्षीय सन्देश खड्काको पनि। सन्देशको गाला र छातिमा भित्री चोट छ। तुलसीपुरकै हिमाल एकेडेमीमा कक्षा १२ मा अध्ययनरत सन्देश पनि तिहार मानेर तुलसीपुर, हेमन्तपुरस्थित मामाघर आउँदै थिए।
बिहान ८ बजेतिर बस चढेका सन्देश पनि मजाले निदाएकै थिए।
'सबै चिच्याएको सुनेपछि मेरा आँखा खुले,' उनले भने, 'त्यसपछि बस पल्टिँदै तल झर्‍यो। एउटा घरमा गएर अड्कियो।'
दुर्घटनापछि अरू के-के भयो, उनलाई खास याद छैन। एकैपटक श्रीनगरमा आफ्ना आमाबुवालाई भेटेको सम्झिन्छन् उनी।
'त्यहाँ मलाई खतरा मुक्त देखेपछि उहाँहरू अँगालो मारेर रूनुभएको थियो,' उनले भने, 'म आफूलाई आज निकै भाग्यमानी ठानिरहेको छु।'
दुर्घटनास्थल केही उकालो बाटो भए पनि त्यस्तो कुनै घुम्ती वा मोड भने नभएको उनले बताए।
'लुहाममा धेरै समय चालक गायब थिए। मदिरा सेवन गरे कि भन्ने शंका छ,' सन्देशले भने, 'नत्र त्यति सजिलो र सिधा बाटोमा कसरी गाडी दुर्घटनामा पर्छ?'
सल्यानका प्रहरी नायब उपरीक्षक गोविन्द थापा भने चालक फरार भएकाले शंकाको भरमा केही भन्न नसकिने बताउँछन्। दुर्घटनालगत्तै चालक फरार छन्।
'घटनास्थल सजिलो ठाउँ छ,' थापाले भने, 'त्यसैले तीव्र गतिका कारण दुर्घटनामा परेको हुनसक्ने हाम्रो अनुमान छ।'
गाडी समितिका एक कर्मचारी बसमा प्राविधिक गढबढी पनि भएको बताउँछन्। गाडीको मेन पट्टा एकै साथ भाँचिएको र अनियन्त्रित भएर दुर्घटनामा परेको सूचना आफूले पाएको उनले दाबी गरे।
'तुलनात्मक रूपमा घटनास्थल सजिलो ठाउँ अवश्य छ,' उनले भने, 'खाल्डाखुल्डीमा चर्किएका पट्टा सजिलो ठाउँमा स्पिडमा चलाउँदा एकै साथ भाँचिएको हुनुपर्छ।'
मेन पट्टा भाँचिएपछि स्टेयरिङले काम नगरी गाडी खसेको उनले तर्क गरे। भने, 'दुर्घटनामा परेको गाडी हेरे पनि थाहा हुन्छ। गाडी दुई टुक्राजस्तै भएर छुट्टिएको छ। पट्टा भाँचिएको देखिएको छ।'
सल्यानकै गाडी साहु पनि बस दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएको उनले जानकारी दिए। साहु गाडीमै हुँदा चालक-सहचालकले हम्मेसी मदिरा सेवन नगर्ने तर्क पनि उनले गरे।
बस दुर्घटनामा दाङ, शान्तिनगर गाउँपालिका-८ की ३५ वर्षीया सावित्रा केसी, शान्तिनगर- ६ कोरबाङका ५ वर्षीय सुरज वली, बबई गाउँपालिका- ४ की ६० वर्षीया डुली रेउले, बबई-६ पञ्कुलेकी ७० वर्षीया कलावती बुढाथोकी, घोराही उपमहानगरपालिका-१० नारायणपुरकी ६५ वर्षीया इन्द्रा अधिकारी, घोराही उपमहानगरपालिका-१० की ३६ वर्षीया रुपा केसीको मृत्यु भएको छ।
त्यस्तै सल्यानको शारदा नगरपालिका-२ की ६१ वर्षीया मीना डाँगी, शारदा-३ की ६६ वर्षीया लीला बुढाथोकी, त्रिवेणी गाउँपालिका- १ काभ्राकी २४ वर्षीया मीना शाही, क्षत्रेश्वरी गाउँपालिका- २ का २९ वर्षीय तिलक वली, त्रिवेणी ४ की ९ वर्षीया सरिता बोहोरा र शारदा नगरपालिका- १२ घर घई हाल दाङ, तुलसीपुर- ६ बस्ने ५३ वर्षीया पर्भा चलाउनेले दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका छन्।
प्रकाशित मिति: आइतबार, कात्तिक २१, २०७८, १०:१७:००